Soo kabashada Safarka Cusub Waxay Qaadataa Horumar
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Warshadaha Warshadaha » Soo kabashada Safarka Cusub Waxay Qaadataa Horumar
2022 waxay arki doontaa horumarka sii socda ee soo kabashada iyada oo warshadaha hudheelka ay ka jawaabayaan baahida isbeddelka ee socotada "cusub".
Hudheeladu waxay u baahan doonaan aragti fog iyo dabacsanaan si ay u maareeyaan
isbedbeddelka sii socda. Laakiin caqabadaha sanadihii hore waxay si fiican u diyaariyeen hoteello si ay uga faa'iideystaan ​​fursadaha horyaalla.
Baahida iyo rabitaanka socotada cusub ayaa raad ku leh huteelada marka ay dejiyaan mudnaanta istiraatijiyadeed oo ay diiradda saaraan ilaha iyo maalgashiga si wax ku ool ah u buuxiyaan baahiyaha martida. 2022, dib-u-dhiska xoogga shaqada, labanlaabista waaritaanka, iyo dib-u-eegista daacadnimada waxay noqon doontaa meelaha muhiimka ah ee hoteellada ee doonaya inay la xiriiraan socotada cusub.
Dib u dhiska Ciidanka Hudheelka ee Waaga Cusub ee Socdaalka
Caqabadaha dhanka shaqada ah ayaa caqabad ku noqday in ay caadi kusoo laabtaan hoteello badan oo dalka ah, taas oo adkeyneysa in laga jawaabo baahida sii kordheysa. In kasta oo ku dhawaad ​​​​warshad kasta ay la kulantay shaqo yaraan sannadkii hore, gabaabsi ayaa si gaar ah ugu xooggan hoteellada sababtoo ah labadaba shaqo ka joojinta faafa iyo mawjadaha dadka ee si ikhtiyaari ah uga tagaya, badiyaa fursadaha warshadaha kale.
Natiijooyinka sahanka xubnaha AHLA ee Oktoobar 2021 ayaa muujinaya sida xaaladdu hadda u daran tahay.
Ku dhawaad ​​dhammaan (94%) jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in hoteelladooda ay ku yar yihiin shaqaale, oo ay ku jiraan 47% kuwaas oo sheegay in ay aad ugu yar yihiin shaqaale. Waxaa intaa dheer, 96% jawaab bixiyaasha ayaa isku dayaya inay shaqaaleeyaan laakiin ma awoodin inay buuxiyaan boosas furan.
Maaddaama warshadaha huteelada ay ku sii socdaan dariiqa soo kabashada 2022, dib u dhiska barkada hibada ayaa muhiim u noqon doonta u adeegida baahiyaha socotada cusub. Ka dib oo dhan, the
warshadaha ayaa la saadaaliyay inay dhamaan doonaan 2022 hoos 166,000 oo shaqaale ah marka loo eego 2019.37
Shaqaalaynta qorista waxay sidoo kale noqon doontaa mid aad u dhib badan warshado badan oo la bixiyo
Warka wanaagsani waa in ay jirto fursad lagu soo jiito oo lagu sii hayo shaqaalaha cusub
siyaabo. Tani waxay la macno noqon kartaa in la dhiso dadaallada jira ee lagu barayo dadka wax kasta oo ku saabsan
waddooyin shaqo oo xiiso leh oo bixiya horumarinta shaqada iyo tababaro xirfadeed oo khuseeya.
Musharixiinta maanta waxay daneeyaan wadooyinka shaqada, qabanqaabada shaqada ee dabacsan, iyo tababarida xirfadaha ee ka dhigaya inay mustaqbalka shaqeeyaan. Hudheeladu waxay sidoo kale haystaan ​​fursad ay ku xoojiyaan kala duwanaanshahooda iyo dhaqamadooda ka mid noqoshada, kobcinta xirfadaha dadka midabka iyo haweenka iyo hubinta in shaqaalaha heerarka kala duwan ay u kala duwan yihiin martidooda.
Labanlaabista Joogitaanka Dadka iyo Meeraha
Sida socotada cusubi ay u eegaan in ay ku ganacsadaan noocyada huteelada ee la jaanqaadaya ujeedadooda gaarka ah, ka go'naanta huteelada ee sii jirista waxa ay si isa soo taraysa u saamayn doontaa go'aannada wax iibsiga. Sahan caalami ah oo dhowaan lagu sameeyay dadka safarka ah ayaa daaha ka qaaday in saddexda meelood ee ugu sarreeya ee ay macaamiishu u malaynayaan in shirkadaha socdaalku ay diiradda saaraan aaggan inay yihiin dhimista qiiqa kaarboonka, dib-u-warshadaynta, iyo dhimista qashinka cuntada. Waxay sidoo kale xiiseynayaan ficilada ka hadlaya balaastikada hal-isticmaalka, qashinka biyaha, iyo ilaalinta korontada.
Iyada oo mulkiilayaasha hudheeladu ay wali dareemayaan cadaadiska dhaqaalaha faafa iyo baahida loo qabo in mudnaanta la siiyo kharashaadka aasaasiga ah ee ilaalinta ganacsigu, maalgelinta waaritaanka waxay u ekaan kartaa mudnaan yar oo degdeg ah.
Haddana hudheeladu maaha inay sameeyaan doorashada u dhaxaysa " samaynta waxa saxda ah " iyo samaynta waxa dhaqaale ahaan caqli-gal ah marka ay timaado sii jiritaan.
Hadafku waa in la waafajiyo maalgashiyada waara iyo soo celinta maaliyadeed si looga gudbo kharash fudud oo loo hogaansamo. Maalgelinta barnaamijyada wadajirka ah, si cad loola xiriiro, iyo siinaya milkiilayaasha soo celinta dhaqaale adag - haddii loo marayo naqshadeynta hoteelka cagaaran, ku wadida hufnaanta tamarta iyada oo loo marayo hababka dhisidda, ama ka qayb qaadashada heshiisyada iibsashada awoodda la cusboonaysiin karo iyada oo ka wakiil ah franchisees - waxay si sii kordheysa u noqon doontaa qaanuunka. Marka laga reebo marka laga reebo socdaalayaasha cusubi waxay u jiidayaan calaamado qiimeeya waaritaanka iyo mas'uuliyadda bulshada.
Dib-u-soo-celinta Daacadnimada Beyond Points
Barnaamijyada daacadnimada ee bartilmaameedsada baahiyaha safarrada ganacsiga oo ku salaysan dhibcaha ururinta ayaa noqon doona mid sii yaraanaya. Hadda barnaamijyada lama huraanka ah waxaa loogu talagalay dadka safarka yar iyo ujeedooyinka firaaqada. Arrin ku saabsan: Bishii Sebtembar 2021, 41% dadka safarka ah ee Mareykanka waxay soo booqanayeen qoyska iyo asxaabta, 41% waxay ahaayeen fasax. Kaliya 8% waxay ku maqnaayeen safarro shaqo, 6% waxay aadeen shir ama shir la xiriira shaqada.
Xaqiiqdu waxay tahay in nidaamyada daacadnimada ee ku salaysan inta jeer ee socdaalka ay ka baxsan yihiin dabeecadaha socotada cusub iyo jawiga baahida la xakameeyey. Iyo xitaa sida dalabku kor u kaco bilaha iyo sanadaha soo socda, isku dhafka ganacsiga iyo safarka wakhtiga firaaqada ayaa si joogto ah loo bedeli doonaa, barnaamijyada daacadnimaduna waa inay la jaanqaadaan dabeecadaha socotada ee hadda si ay si dhab ah uga hawl galaan.
Hudheelada dib u habeeya barnaamijyada daacadnimada ee dhaqdhaqaaqyada qaababka dalabka cusub ayaa ku jira booska ugu fiican ee lagu dhisayo daacadnimada. Tani waxay ka dhigan tahay xisaabinta qaabka khibradda, qaabka xogta, iyo qaabka ganacsiga. Dhammaan qaybahan waxay si wadajir ah u shaqeeyaan si ay u abuuraan barnaamijyo daacad ah oo ku salaysan baahiyaha aadanaha iyada oo la taageerayo dhinacyada hawlgalka ee bixinta iyaga.
Hotel Sustainability United States Shaqaalaha
Dadka Mareykanka ah ayaa uga digay inay ka fogaadaan safar kasta oo ay ku tagaan Ruushka hadda
Socotada Cusub: Raadinta Ujeedo marka dunidu dib u furto
Hello, Qurux badan! GABAR QOSOL BADAN oo joogta Sofitel New York hadda
Tikidhada dhalinyarada ee ku xidhan Baraha Bulshada
Default: Sri Lanka waxay joojisay dhammaan lacagihii ay ku bixin jirtay ajnabigeeda...
WaterWipes kama sheegan karaan finanka xafaayadda